Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका पाँच नेताबीच छलफलः प्रधानमन्त्रीद्वारा कडा काउण्टर
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका पाँच नेताबीच छलफलः प्रधानमन्त्रीद्वारा कडा काउण्टर
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार १४:०५
काठमाडौँ, २२ कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको गुटबीच छलफल सकिएको छ ।
आज नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा अनौचारीक रुपमा गुटको बैठक बसी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयको बैठक बोलाउन औपचारीक रुपमा लिखित पत्र सहित गएका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको पाँच जनाको गुट प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार गएको थियो ।
नेकपा सचिवालय बैठकको आग्रहका लागि पुगेका सचिवालयका पाँच सदस्य र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच चर्काचर्की परेको छ । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार ओली बैठक बोलाउन तयार नभएपछि चर्काचर्की परेको हो ।
“तपाईँहरु गुटबन्दी गर्दै हिँड्नुभएको छ,” ओलीको जवाफ थियो, “अहिले केका लागि बैठक बोलाउने रु मैले बैठक बोलाउँदिनँ ।”
‘म बैठक बोलाउन्नँ । किन बोलाउने ? मेरा विरुद्ध गुटबन्दी गर्ने ? मलाई असफल पार्न खोज्ने ? ‘तपाईहरु गुटबन्दी गर्ने काम बन्द गर्नुहोस, एकता विरोधी काममा नलाग्नुहोस । गुटबन्दी गरेर ज्ञापनपत्र पत्र बुझाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । पार्टी एकताको जगमा उभिनुहोस ।’ ओलीको आक्रोश थियो । ओलीले आफूलाई सँधै अफ्ठारोमा पार्ने काम पार्टीभित्रै बाट भइरहेको भन्दै जनमतको अपमान नगर्न समेत चेतावनी दिए ।
जबज ब्यूँताउने भन्दै जुम बैठक गरेर गुटबन्दीको आह्वान ओलीले गरेको प्रचण्डको आरोप थियो । यस्तै हरेक विषयमा मनपरी गर्ने तथा पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै ओलीको आलोचना गरेका थिए ।
ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार ओली धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा बसेर गुटबन्दी गरिरहेको बताएका थिए । पाँचजना सचिवालय सदस्यहरुले औपचारिकरुपमा नै लिखित पत्र बुझाएका थिए । त्यसअघि धुम्बाराहीमा बिहान दुईघण्टा छलफल गरेर नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए ।